Ukugubha usuku lomama eLas Vegas
I-Afrika neMpumalanga Ephakathi
I-Tech & Gear
I-united states I-Nevada Las Vegas
Indlela Yokuchitha Usuku Lomama Las Vegas
Umhlahlandlela osukwini lomama eLas Vegas
Uma ubuza umama wakho uzokutshela ukuthi usuku lomama luyisuku esibaluleke kakhulu konyaka. Uma ubuza umkakho uzokutshela ukuthi uyayifuna futhi iyenze. Uma ubuza izingane zakho ngeke zikwazi ngisho nokuthi Usuku loMama lusondela. Yebo, akekho umbono ocacile osukwini lukaMama ngaphandle kokuthi wenze okuthile ngakho kungani ungenzi eLas Vegas.
Uhlelo oluphelele losuku lomama oluphelele eLas Vegas.
Ngizokunika izinketho ngoba sonke sidinga izinketho uma siseduze ukuchitha usuku oluphelele nomama eLas Vegas.
Indlela yokuchitha usuku lomama eLas Vegas
Udinga imibono yosuku lwamaMama futhi udinga ukuba usheshe? Sebenzisa lolu hlu lwezindawo ongahamba ngalo ngosuku lwamaMama eLas Vegas.
Ungazama futhi lezi zinsiza ukuze uthole isidlo seSuku Lomama eLas Vegas:
Thola Izindawo Zokudlela Zomama Omnandi E-Las Vegas
Thola Izindawo Zokudlela Ezinhle E-Las Vegas
77 Izindawo Zokudla Okungabizile e Las Vegas
Indawo yokudlela yase-Las Vegas
Izindawo zokudlela ezingu-100 eLas Vegas
Kuphephile ukusho ukuthi angikwenzi kahle nemithetho kamasipala. Ake sibhekane nakho, umsebenzi wami uqukethe ama-trolling amaqembu afuna izindawo ezingcono kakhulu lapho abantu ababili bekwazi ukufeza amafilimu abo aseLas Vegas. Uqala ukwenza umsebenzi okhandla wokubukeza amaqembu omhlukumezi, imibukiso engenayo engenayo kanye nemigoqo lapho abantu abesilisa noma abesilisa ocansini benethemba lokuthi ubusuku obuphelele buzoqhuma futhi ungacabange kalula ukuthi kuthini uma ngifanele ukuhlangana nomndeni wami owandisiwe.
Usuku lomama eLas Vegas alufani kodwa nganquma ukwenza umzamo wangempela ekuphenduleleni iphutha eliyiphutha lokuthi abantu abahlukumezayo kuphela emphakathini wethu bangajabula kule Las Vegas. Ngisho nabomama bethu bangaba nesikhathi esihle eLas Vegas. Kwakudingeka ngilawule ama-nickel slots ngoba umama empeleni uba owesifazane obabayo lapho elahlekelwa ama-dollar angu-20 edlule nomamazala wami uhlobo oluthola kangaka iziphuzo zamahhala ukuthi libhubhisa lonke ekuseni.
Nganquma ukuthi bahlangane nathi, umkami kanye nezingane, eRio ngokudubula masinyane eBuffet yabo. Ngesinye isikhathi lawa wesifazane wathokoza ngale ndawo ngakho ngibavumela ukuba bahambe ngendlela yabo ngamaqanda anamapulangwe nama-muffin omile. Nginezimiso ezimbalwa uma kuziwa kuma-buffets ngakho ngenza isiqiniseko sokuthi ngibanikeze ikhophi yendaba yami ye- buffet etiquette. Uma kukhona into eyodwa engikwazi ukumelana nomuntu ongasebenzisi amandla akhe lapho evakashela konke ongadla umkhosi. Ngama-$ 12.99 Ngingadla umama ngamunye ohilelekile futhi angene ehoreni emdlalweni we-4/8 emkhathini ekamelweni laseRio Poker. Angilindelekile ukwenza wonke umsebenzi, umkami kwakudingeka ahlale kulokhu okungenalo umqondo. Ubuqili awusoze wabatshela ukuthi udlala i-poker, wenza nje ukuphuma okusheshayo futhi uqaphele ukuthi ngesikhathi sokuphefumula kokudla ngeke bazi ukuthi usuhambe.
Lapho ngiphakamisa umqondo wegolfu nxazonke ngosuku lwamaMama eLas Vegas, wadutshulwa ngokushesha umkami. Ngokusobala, ukwethula izinto ezintsha kumama bethu kwakungekho kuhlu oluvunyelwe lwezinto ongayenza ngosuku lukaMama. Ngako-ke nganquma ukuwagijima ngeMadame Tussauds Wax Museum eVenetian. I-Real esheshayo, kufanele wazi ukuthi uma uphazamiseka lapho ubona izakhamuzi eziphakeme, ohlala njalo ephethe izibhuku, ezithathwe nguJennifer Lopez futhi ucabange ukuthi zinempahla emihle; gwema le ndawo.
Ngalesi sikhathi ntambama ngangidinga isiphuzo futhi ngicabanga ukuthi laba boMama ababili babedinga amakholori amaningi ngaphambi kosuku babethatha umonakalo kubo. Eqinisweni, uma ngidinga elinye ithangi le-oksijini eduze kweHorseshoe Angiqiniseki ukuthi ngingaba yini indodana ehloniphekile. Ngangenza labesifazane behamba baya eNdlini yamaKhosi futhi bagxumeke kwi- monorail. Umkami nezingane zami bahlangana nabo eMGM Grand ngesidlo sasemini.
Ngihlala ngiyathokozisa ukuthi mina nomkami singakwazi ukukhetha konke okuphathelene nabomama bethu. "Ungayifaka kanjani le nhlanzi emgqeni wayo osepulini yakho?", Umkami wabuza ngomama. "Angenza kanjani ukuthi nje ungumusi we-Orange" Ngicela ukwazi ngokugcwele ukuthi ngangiyalile umkhwekazi isispreddriver. Ngihlale ngiyazi ukuthi uninazala ongenamahloni angalethela ububi kuphela esimweni. Ngakho, empeleni ngimyala kabili.
Ukudla kanye nomama nomamazala bangakwazi ukukwenza kuphela njengoba ngithanda uSam Adams nomfana wePo e- Emeril's New Orleans Fish House. Kwakudingeka ngiqaphele ukuba ngingavumeli ukuba bahlele ngokwabo ngoba umama wami uyakwazi ukuyala isidlo esivimba kakhulu kunazo zonke imenyu futhi umamazala ukholelwa ukuthi konke okuseLas Vegas kuyinkululeko. Lesi sidlo esilula nabomama ngoba ngithembisa ukuthi ngizoyikhulula amahora ambalwa ukuze ngibheke uMGM Grand. Phakathi naleso sikhathi, ngathatha izingane zami nomama wazo emgwaqweni wokugwedla emgwaqweni ehhotela laseNew York / eNew York naseCasino.
I- Manhattan Express Roller Coaster eNew York-New York umqondo womkami wokuzijabulisa ngosuku lomama. Ayikho into efana nokubukela abafana bakhe ekhanda phezulu amaphaphu abo njengoba inhliziyo yakhe igxila emgodini wesisu. Ngemuva kokugibela kabili nemidlalo embalwa ye-arcade sithola umamazala ngesiphuzo esandleni sakhe futhi umama enxanela umshini wokubheja weBetty Boop.
Sekusile ntambama futhi nginikeza abazukulu kusihlwa nabafana futhi ungacabanga ukuthi nginamathikithi amabili ebhodini lokuthengisela iBhodiwalk. Bajabule futhi mina nomkami sikhululekile ukuhamba edolobheni kusihlwa.
Ngingathanda ukukutshela ukuthi sidansa ubusuku bonke e-nightclub noma siphuze ku-Mandarin Bar. Esikhundleni salokho, sahamba safika eParis futhi sachitha usuku lomama othulile eLas Vegas sinokudla okukhulu eMon Ami Gabi futhi sihleka ngezinto ezicasulayo omama bethu.
Ngithemba ukuthi asikaze sithathe amazinyo ethu ngeminwe yethu kuphela ukuhlola okuqukethwe bese sidla okutholakala kwethu. Ngithemba ukuthi asikaze sigwebe futhi sidlule negesi ngesikhathi esifanayo esitolo sokudlela futhi sibeke amazwana ukuthi isaladi kumele ibe ne-broccoli. Kodwa, konke kuxolelwe ngoba omama manje sebeba ugogo futhi ngingaba ngisindise imali eningi ngokuba nje ngibheke izingane ngasechibini.
Angikwazi ukulinda usuku lukababa, ngoba ngingaqinisekisa ukuthi kuzoba amaqembu, ama-bar and poker abafana.
NgoJuni noJulayi eLas Vegas
Izindawo zokudlela ezinomsoco ezinhle kakhulu e-Las Vegas
Ukudlala ama-casino aseLas Vegas ku-Budget
Kuphi Ukudla Las Vegas
Ukuthenga Okungabizi e Las Vegas
Isikhathi Sama-cocktails Esikhathini Esiphakeme Esijabulisayo Ihora LaseLas Vegas
I-Chandler, i-Tempe, i-Maricopa, i-Casa Grande Movie Theaters
Amahora angu-48 eHouston: Uhambo Oluphelele
Disneyland Themed Suites
Amathiphu Okudingekayo Wokushayela eCanada
Iyini i-Patriots Day Journée des Patriotes yaseQuebec?
I-Aspen Gay Ski Ski 2016
I-Manhattan Museums: I-World Trade Center Isikhungo sika-9/11 seSikhumbuzo Semikhumbuzo
Ukuletha Utshwala eCanada
Amabhuku ahamba phambili nezincwadi ezihamba phambili ze-Florence, e-Italy
Amakethe Wokudla eParis ngo-Arrondissement
Ama-8 Omakhelwane Okudingeka Uwahlole eNingapore
Hlola Circle Dupont: A Washington, DC Omakhelwane
Umkhosi weGuelaguetza e-Oaxaca
Imisebenzi emihlanu ephezulu ye-Romantic e-San Diego
© 2021 zu.traasgpu.com